भिडियोमा हेर्नुहोस् राधिका हमालको उकुसमुकुस– “दुईटा लोग्ने राख्न किन नपाउने ?” - Nepali Virals
२० फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०७:५२	522 पटक-पढिएको
पौराणिक कालमा पाँच पाण्डपले एउटै श्रीमती द्रौपती विवाह गरेको प्रसंग हामी सवैलाई थाहा छ । अहिले पनि कहि कतै दाजुभाई सबैको एकै श्रीमती विहे गरेको समाचारहरु यदाकदा सुनिन्छ । यी त भए धेरै जनाको एउटै श्रीमती तर धेरै श्रीमतीको एउटै श्रीमान पनि नभएका भने होईनन् ।
पछिल्लो समय चेतना र बहुविवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याएसँगै एक भन्दा बढी श्रीमती बिहे गर्ने चलन घटेका छन् । तर पनि यदाकदा जेठीलाई मनाएर वा छोडेर कान्छी भित्र्याउने चलन भने हटेको छैन ।
छोरा नभएको बहानामा होस अथवा अन्य विविध कारणले नै किन नहोस पहिलो श्रीमती हुँदा हुँदै अर्काे विहे गर्ने चलन अझै पनि छ । दुर्गम गाउँघरमा त कतिसम्म हुन्छ भने आप्mनो तर्फबाट सन्तान नभएमा वा छोरा नभएमा जेठी श्रीमती आफैले कान्छी बिहे गरि दिने अथवा बिहे गर्न स्विकृत दिने चलन पनि छ ।
यी त भए दुर्गम र अशिक्षित क्षेत्रका प्रसँग । यसको मतलव शिक्षित जमातमा यस्तो समस्या नभएका भने होईनन् । लभ, रोमान्स र अधिकारका नाममा डिभोर्स समेत बढ्दै छ । कतिपयले भने पुरुषले एक भन्दा बढी श्रीमती विहे गर्न हुन्छ भने महिलाले एक भन्दा बढी पुरुष राख्न किन नपाउने ? भन्ने सवाल पनि उठन थालेका छन । मुखले बोल्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुमा आकाश पाताल फरक हुन्छ । तै पनि सतही सवाल जवाफ गर्न मन पराउनु मानवीय स्वभाव नै हो ।
यहाँ लोकप्रिय गायिका राधिका हमालले पनि पाँच पाण्डपको प्रसँग कोट्याउदै दुई श्रीमान राख्न किन नपाउने ? भनेर जिज्ञासा राखेकी छिन् । तर यो बास्तविक भन्दा पनि चेतनामूलक प्रस्तुती मार्फत उनले यो विषय उजागर गरेकी हुन । तरेली संगित कुञ्जको प्रस्तुतिमा विनोद कोइरालाको दोहोरी भजन चुड्कामा गायिका हमालले यो प्रसंग उठाएका हुन । यस दोहोरी भिडियोमा पौराणिक कालका प्रसंगहरुलाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यसँग तुलना गरेर रमाईलो खुराक प्रस्तुत गरिएको छ ।
गीतको पहिलो दुई हरफ
पाँचै जना पाण्डप पति द्रौपतीसँग आउने
हामीले दुईटा लोग्ने राख्न पाउने कि नपाउने ?
जय जय दुर्गे माता, सोध्नै पर्याे अब त….
काले कृष्ण नक्कलेको सोह्र सय गोपिनी
मेरो भने कुरै काट्छन जो सँग बोले नि
क्या’रम नारद मूनी, जे गर्दा नि नहुनी…..
अघिल्लो प्रसिद्ध लेखकको एउटा भाइरल कथा: ‘पुरुषसँग मेरो पहिलो रात’
पछिल्लो पूजा गर्दा यी ७ कुरा ध्यान दिए भगवान प्रसन्न